Ubulumko kunye neNdlela yesibhozo
Inkalo yesibini yeNdlela yesibhozo yeBuddhism yiNjongo yokuLungisa okanye ukuCinga ngokufanelekileyo , okanye i- samma sankappa e-Pali. Iimbono ezifanelekileyo kunye neNjongo yokuLungisa kunye "yiNdlela yoBulumko," iinxalenye zomzila ohlakulela ubulumko ( prajna ). Kutheni iinjongo zethu okanye iinjongo zethu zibaluleke kangaka?
Sivame ukucinga ukuba iingcinga azizibali; kuphela into esiyenzayo. Kodwa uBuddha wathi kwiDhammapada ukuba iingcamango zethu zihamba phambili kwizenzo zethu (ukuguqulelwa kweMax Muller):
"Yonke into esiyiyo yiphumo yento esicinga ngayo: isekelwe kwiingcamango zethu, yenziwe ngeengcamango zethu. Ukuba umntu uthetha okanye wenza ngokucinga okubi, intlungu iyamlandela, njengoko isondo lilandela inyawo yenkomo leyo idonsa isithuthi.
"Yonke into esiyiyo yiphumo yento esicinga ngayo: isekelwe kwiingcamango zethu, yenziwe ngeengcamango zethu. Ukuba umntu uthetha okanye wenza ngeengcinga ezicacileyo, ulonwabo luyamlandela, njengesithunzi esingaze sishiye kuye. "
UBuddha wafundisa nokuba oko sikucingayo, kunye noko sithethayo nendlela esenza ngayo, kudala i- karma . Ngoko, into esiyicinga ukuba ibalulekile njengento esenzayo.
Iintlobo ezintathu zeNjongo efanelekileyo
UBuddha wafundisa ukuba kukho iintlobo ezintathu zeNjongo ezifanelekileyo, eziphikisana neentlobo ezintathu ezingenangqondo. Zezi:
Injongo yokurhoxisa, ebalawula injongo yomnqweno.
Injongo yentando efanelekileyo, ebalawula injongo yokungafuni.
Injongo yokungenakonakala, ebalawula injongo yokulimaza.
Ukulahla ukuyeka okanye ukuyeka into ethile, okanye ukuyikhanyela. Ukuziqhelanisa akuthethi ukuba kufuneka unike yonke impahla yakho kwaye uhlale emqolombeni, nangona kunjalo. Imbambano yangempela ayikho izinto okanye izinto eziphathekayo ngokwabo, kodwa i-attachment yethu kubo.
Ukuba unika izinto ngaphandle koko unamathele kubo, awukwenzanga ngokwenene.
Ngamanye amaxesha eBuddhism, uvalelwa ukuba ii- monks kunye namantoni "zilahliwe." Ukuthatha izibhambathiso zezibhambathiso kuyisenzo esinamandla sokwenyuswa, kodwa oko akuthethi ukuba abantu abangeke bakwazi ukulandela iNdlela Eyesibhozo. Yintoni ebaluleke kakhulu ukuba ungayinamatheli ezintweni, kodwa khumbula ukuba unamathiselo luvela ekuzijongeni thina kunye nezinye izinto ngendlela ekhohlisayo. Ukuqonda ngokupheleleyo ukuba zonke iintozi ziphela kwaye zilinganiselwe-njengoko iDamond Sutra ithi (Isahluko 32),
"Yiyo indlela yokucinga ngayo ubukho bethu obunjani kwili hlabathi elidlulayo:
"Njengomsila omncinane wamazolo, okanye umbhobho ojikelezayo kumlambo;
Njengombane wokukhanya efu ehlobo,
Okanye isibane esiqhaqhaqhazelayo, isicatshulwa, i-phantom, okanye iphupha.
"Ngako oko yonke imeko ekhompyutheni ibonakala."
Njengabahlali, siphila kwihlabathi lempahla. Ukusebenza kuluntu, sidinga ikhaya, iimpahla, ukutya, mhlawumbi imoto. Ukuze ndiyenze umsebenzi wam ndiyidinga ngempela ikhompyutha. Sifumana ingxaki, nangona kunjalo, xa sikhohlwa ukuba thina kunye "nezinto" zethu ziyaqhuma kumlambo. Kwaye, ke, kubalulekile ukuba ungathathi okanye uhlasele ngaphezu kokufunayo.
Elinye igama elithi "intando enhle" li- metta , okanye "inceba." Sihlakulela inceba kubo bonke abantu, ngaphandle kokucwaswa okanye ukuzincama, ukunqanda umsindo, ukuthanda okubi, inzondo, nokunyaniseka.
Ngokutsho kweMetta Sutta , iBuddhist kufuneka ihlakulele zonke izilwanyana uthando olufanayo umama onokuzivelela ngomntanakhe. Olu thando alukhetheli phakathi kwabantu abanobubele kunye nabantu abanobubi. Luthando apho "mna" kunye "nawe" uyalala khona, kwaye apho kungekho mnikazi kunye nento engayinayo.
Igama lesiSanskrit elithi "elingenakonakalisa" liyi- ahimsa , okanye i- avihiṃsā e-Pali, kwaye ichaza umkhuba wokungonakalisi okanye ukwenza ubundlobongela nantoni na.
Ukungazilimazi kufuna i- karuna , okanye imfesane. UKaruna uya ngaphaya kokungakhange akhathaze. Uvelwano olukhulu kunye nokuzimisela ukuthwala intlungu yabanye.
Umzila wesibhozo awulona uluhlu lwezithuba ezi-8 ezithe ngqo. Inxalenye nganye yendlela ixhasa yonke into. UBuddha wafundisa ukuba ubulumko nemfesane kuvela ndawonye kunye nokuxhasana.
Akunzima ukubona indlela iNdlela yoBulumko yoBonelelo oluBulungisa kunye neNjongo yokuLungisa ikwaxhasa nendlela yokuziphatha yokuziphatha, Intetho yokuSebenza , ilungelo lokuSebenza , kunye nokuPhila okuPhezulu . Kwaye, ke, zonke iinkalo zixhaswa nguMzamo oLungileyo, ukuKhathazeka okuKhe , nokuKhathalela okuKulungileyo , iNdlela yokuLawula ngengqondo.
Iinkqubo ezine zeNjongo ezifanelekileyo
Uthisha weZen waseTanzania uThich Nhat Hanh ucebise le ndlela emine kwiNjongo yokuLungisa okanye ukuCinga ngokufanelekileyo:
Zibuze, "Ngaba uqinisekile?" Bhala umbuzo kwisiqwenga samaphepha uze uxhomeke apho uza kubona khona rhoqo. Iingcinga zeWong zikhokelela ekucingeni okungalunganga.
Zibuze, "Ndiyintoni na?" ukukunceda ukuba ubuyele kumzuzu wamanje.
Qaphela amandla akho omkhwa. Amandla okuhlala njengento yokubangela ukuba silahlekelwe yimiba yethu kunye nempilo yethu yemihla ngemihla. Xa uzibamba kwi-auto-pilot, tshela, "Sawubona, umkhwa wamandla!"
Ukuhlakulela i-bodhicitta. I-Bodhicitta isifiso senceba ukuqonda ukukhanya ngenxa yabanye. Iba yizona ziNgcono ezifanelekileyo; Amandla ashukumisayo asigcina kwiNdlela.
UYesu Ucocekisa Ithempelithi Yabaguquleli bemali
I-Shawnee State University Admissions
Yiyiphi Eyilungileyo: I-Weatherproof okanye i-Weather-Resistant?
Ukuqonda iintlobo ezahlukeneyo zobuGebengu
IMfundo yaseMassachusetts kunye neZikolo